Tuesday October 09, 2018 - 11:27:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in ciidamo American iyo Soomaali ah ay wadaad caan ah ku dileen mid kamida degmooyinka gobolkaasi.
Xalay saqdii dhexe ayay ciidamo Mareykan ah oo ay la socdeen maleeshiyaad Soomaali ah waxay gudaha degmad Wallaweyn ku dileen Sheekhii magaalada ka akhrin jiray Tafsiirka Qur'aanka Kariimka.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in ciidamadu ay xoog ku galeen guriga Sheekh Nuur Cusmaan kadibna ay banaanka ulasoo baxeen halkaas oo ay ku toogteen.
Sheekha ladilay ayaa maamule ka ahaa madaraso diini ah oo lagu magacaabo Bilaal wuxuuna caan ka ahaa magaalada Wallaweyn iyo hareeraheeda sidoo kale wuxuu ahaa sheekha kaliya ee Tafsiirka Qur'aanka ka akhriya masaajidda magaalada.
Dibad baxyo ay ka qeyb galeen boqolaal qof oo loogasoo horjeedo dilka sheekha ayaa maanta barqadii ka dhacay Wallaweyn, ciidamada American-ka iyo kuwa dowladda Federaalka ayaa markii ay sheekha dileen waxay dib ugu laabteen garoonka diyaaradaha Wallaweyn oo markii hore ay kasoo duuleen.
Dilka culimaa'udiinka iyo dadka waxtarka u ah bulshada oo ay geysanayaan ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada ee la shaqeeya ayaa bilihii lasoo dhaafay kusoo badanayay gobollada Sh/Hoose iyo Jubbooyinka oo dowladda Mareykanka ay saldhigyo ku leedahay.